Kitra - Lalao ara-pirahalahiana :: Mpilalaon’ny Barea dimy tany Ejipta tsy ho any Portigaly • AoRaha
Rehefa avy natolotry ny mpanazatra nasionalin’ny Barea, Nicolas Dupuis, ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra, dia nivoaka ny lisitr’ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena malagasy hiatrika fiofanana sy lalao ara-pirahalahiana amin’i Burkina Faso, any Portigaly amin’ ny 5 – 11 oktobra ho avy izao. Mpilalao dimy niatrika ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika « CAN 2019 » natao tany Ejipta no tsy voaantso, ankoatra an’i Faneva Ima Andriatsima, izay efa nandeha nisotro ronono.
Isan’ireny Rakotondrazaka Ando, Randrianasolo Dieu Donné (Leda), Ramanjary Théodin, Rakotoharimalala Njiva ary Andriamirado Arohasina na i Dax.
Raha ny fanazavana dia « ny tsy fisian’ny sidina hahafahan’izy ireo mamonjy an’i Portigaly sy ny olana ara-bola » no antony tsy niantsoana azy ireo. Saika mpilalao avy any Eoropa, Arabia Saodita ary ireo aty amin’ny fari-dranomasimbe Indiana avokoa ireo telo amby roapolo nantsoina, ankoatra an’i Romain Métanire avy any Etazonia. Mbola tsy tena azo antoka ihany koa anefa ny hahatongavan’ity farany, noho ny olana eo amin’ny sidina avy any Amerika.
Isan’ireo mpilalao tafaverina ho ao anatin’ny Barea kosa Rambeloson Toavina sy Randriambololona Zotsara, izay efa samy tao saingy tsy lasa tany Ejipta, noho ny ratra nanjo azy ireo talohan’ny dingan’ny fifanintsanan’ny CAN 2019. Saika nantsoina kosa ireo mpilalao efatra vaovao, sambany handrafitra ny Barea, dia i Sylvio Ouassiero, Bastien Charles Patrick Hery, Alexandre François Ramalingom ary Hakim Djamel Abdallah. Hanazarana azy ireo hiara-hilalao amin’iretsy efa taloha no anton’ity lalao ara-pirahalahiana tokana ho an’ny Barea amin’ity taona ity.
Fanamboarana ny kianja Barea :: Vita 90% ny fototry ny « gradins » etsy Mahamasina